पुनर्निर्माणमा जनपरिचालन आवश्यक - Karobar National Economic Daily
पुनर्निर्माणमा जनपरिचालन आवश्यक
query_builderApril 17, 2017 10:56 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility321
सीताराम कट्टेल, हास्यकलाकार
नेपाली हास्यकलाकारितामा स्थापित सीताराम कट्टेललाई अभिनयले वास्तविक नामभन्दा पनि धुर्मुस भन्ने चरित्रले चिनायो । उनीसँगै उनकी श्रीमती कुञ्जना घिमिरे पनि सुन्तली नामको चरित्रबाटै स्थापित भइन् ।
तर, पछिल्लो समय भने उनीहरूको परिचय धुर्मुस–सुन्तली नामका कलाकारभन्दा पनि समाजसेवी र पुनर्निर्माणका संवाहकका रूपमा स्थापित भएको छ । उनीहरूद्वारा स्थापित धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनमार्फत तीन स्थानमा एकीकृत नमुना बस्ती स्थापित भएका छन् ।
तीमध्ये दुईवटा बस्ती पहाडी जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि बनाइयो भने एउटा तराईको विपन्न मुसहर समुदायका लागि । उनीहरूले काभ्रेको डाँडागाउँ पहारी बस्तीमा २० र सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा ६५ परिवारका लागि एकीकृत नमुना बस्ती बनाए ।
यस्तै, पछिल्लो पटक महोत्तरीको मुसहर बस्तीमा ५३ घरको एकीकृत नमुना बस्ती बसालेका छन् । यही पुनर्निर्माणकै कारण उनीहरू दुई वर्षदेखि कलाकारिताको मूल प्रवाहभन्दा पनि टाढा रहे । पारिवारिक, कलाकारिताको जीवन र व्यावसायिकताभन्दा टाढा रहेर सामाजिक अभियानमा लागेका सीताराम अब भने क्रमिक रूपमा कलाकारितामा फर्कने योजनामा छन् ।
सँगसँगै सामाजिक काममा एक किसिमको अम्मल पनि लागेको छ उनमा । त्यसैले सामाजिक काम चटक्कै बिर्सन पनि सक्दैनन् । के छन् त उनका अबका योजना ? तीनवटा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणमा उनको अनुभूति कस्तो रह्यो त ? कारोबार दैनिकका लागि झापा संवाददाता गोपाल झापालीले झापाको गौरादहस्थित सीतारामको घरैमा पुगेर गरिएको कुराकानी :
तीनवटा नमुना एकीकृत बस्ती बनाउनुभयो, अहिले कस्तो लागेको छ ?
यसको त कुनै लेखाजोखा छैन । खुसी मापन गर्ने केही भइदिएको भए थाहा हुन्थ्यो । तर जे होस्, रित्तो हातबाट सुरु भएको अभियानमा देश–विदेशका नेपाली, प्रवासी तथा अन्य सहयोगीहरूको साथ पाइयो । उहाँहरूको उत्साहले हामीलाई ऊर्जा दियो ।
त्यही ऊर्जाका कारण धेरै भूकम्पपीडित र विपन्न मुसहर समुदायको अनुहारमा खुसी ल्याउन सफल भयौं भन्ने लागेको छ । घरबारविहीन र घर भएर पनि कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गरिरहेका अनुहारमा उज्यालो ल्याउन सक्यौं । यो देख्दा त अभियान तथा पुनर्निर्माणका क्रममा भोगेको सबै दुःख–कष्ट भुलिन्छ ।
दुई वर्ष कलाकारिताबाट टाढा रहनुभयो, पुनर्निर्माणमा खटिनुभयो । यस बीचमा घरपरिवार तथा आफ्नो जीवन–निर्वाहचाहिँ कसरी भयो ?
घरपरिवारमा दुई छाक खाने र बस्ने व्यवस्था छँदै थियो, त्यसैले चल्यो । व्यक्तिगत रूपमा पनि म र कुञ्जना (सुन्तली) ले केही कम्पनीका ब्रान्ड एम्बेसडर भएर काम ग¥यौं । केही स्टेजहरूमा गइयो । यसले दुःखसुख जीवन चल्यो । अबचाहिँ कलाकारितामा अलिक समय दिने योजना छ ।
भूकम्प गएका बेला तपाईंहरू अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो । भूकम्प गएको केही दिनपछि नेपाल आएलगत्तै बस्ती पुनर्निर्माणको योजना कसरी बन्यो ?
वास्तवमा हामी भूकम्प जाँदा अमेरिकामा विभिन्न कार्यक्रमका लागि पुगेका थियौं । त्यहाँ भूकम्प पनि गएन, परकम्प पनि गएन । तर पनि हामी चिच्यायौं, रोयौं । किन भन्दा आफ्ना आफन्त, देश, शुभेच्छुक सबै नेपालमै थिए ।
त्यसैले हतार–हतार फर्कियौं । नेपाल आइपुग्दा त हाम्रै आफन्तहरू पनि घाइते हुनुभएको रहेछ । हामीलाई अमेरिकामा छँदा आत्तिन्छन् भनेर केही भनिएन । भूकम्प गएको एक सातापछि हामी वैशाख २० गते काठमाडौं आइपुग्यौं र भोलिपल्टदेखि नै सहयोग, उद्धार र राहतमा जुटिहाल्यौं । कतै उद्धारमा खटियौं, कतै शौचालय बनायौं, कतै धारा जोडिदियौं ।
यसो गरिरहँदा कुञ्जनाले भनिन्, “एउटा ‘मोडल सिटी’ बनाऔं ।” तर, भन्नासाथ सहर नै बसाल्न त सम्भव थिएन । त्यसैले धारा, शौचालय, सरसफाइ, बसोबासलगायतका सहायताको प्याकेजकै रूपमा सहर बनाउन नसके पनि नमुना बस्तीचाहिँ बनाऊँ न त भनेर हिम्मत ग¥यौं । सुरुमा त सहयोग कसरी ल्याउने, कहाँबाट ल्याउने, कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल थियो । तर, हामीले काम थालेपछि सबैले विश्वास गर्नुभयो ।
भूकम्पपीडितहरूलाई अरू कुनै सहयोग गर्न सकिन्थ्यो, ठाउँ–ठाउँमा धेरै घर बनाउन सकिन्थ्यो, शिक्षा–स्वास्थ्यमा काम गर्न सकिन्थ्यो । तर, एकीकृत बस्ती नै बसाल्ने योजनाचाहिँ कसरी बन्यो ?
नेपालजस्तो विकासोन्मुख र भूधरातल भएको देशमा एकीकृत बस्ती विकास अनिवार्य आवश्यकता हो । यो हामीले ठहर ग¥यौं । किनभने बस्ती व्यवस्थित र एकीकृत भएन भने सबैतिर विकासका पूर्वाधार पु-याउन कठिन हुन्छ । फाट्टफुट्ट घर बनेपछि त्यहाँ खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकजस्ता पूर्वाधार पु¥याउन पनि कठिन हुन्छ । तर, एकीकृत रूपमा बस्ती बनाइयो भने त एकैसाथ धेरैलाई सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । फेरि एकीकृत बस्तीले सामाजिक रूपमा कायम वर्गीय विभेद हटाउन पनि मद्दत गर्छ ।
कसैका घर साना, कसैका ठूला, कसैका कस्ता रंगका, कसैका कस्ता प्रकृतिका भयो भने मानिसमा धनी–गरिबको महसुस हुन्छ । तर सबैका उस्तै घर, उस्तै आकार, उस्तै रंग, उस्तै प्रकृति भयो भने सबैले समानताको महसुस पनि गर्छन् । तर, यो कुरा अझै पनि नीति निर्माण गर्ने र सरकार चलाउनेहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । हामीलाई पनि पुनर्निर्माण थाल्नुअघि त्यहाँका बासिन्दाहरूमा यही कुरा बुझाउन निकै मेहनत गर्नुप¥यो ।
यो सहयोग गर्ने, बस्ती बसाल्ने कुराको योजना कसरी बन्यो ? श्रीमतीबाट सुरुमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
हेर्नुस्, म न योजनाबद्ध रूपमा कलाकार बनेको हुँ, न एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको काममै । म त जे अगाडि आउँछ त्यही अनुसार चल्ने मान्छे हुँ । यी बस्ती पुनर्निर्माणको काममा पनि मभन्दा बढी कुञ्जना (सुन्तली) खटिएकी छिन् । म एक्लैले त के नै गर्ने सक्थें र ? म बाबु भएर सानी छोरी घरमा छाडेर बाहिर हिँड्न जति सजिलो थियो, आमालाई निश्चय नै गाह्रो हुन्छ । तर, उनले त्यो हिम्मत गरिन् ।
सानी काखे छोरीलाई घरमा राखेर इँटा–बालुवा बोक्न खटिइन् । त्यसैले कसको कति योगदान भन्ने कुरै भएन । फेरि भुइँचालो गइदिओस् र म पुनर्निर्माणमा खटिएर समाजसेवी बनुँंला भन्ने कसैको पनि मत हुँदैन । भूकम्प गएपछि हामी अमेरिकाबाट आयौं । सँगै सल्लाह भयो । त्यसपछि हामी सोझै काममा लाग्यौं । योजना बनाउन, स्रोत खोज्न थालेको भए सायद यति चाँडै काम हुने पनि थिएन होला ।
बस्ती बसाउने कुरामा सडक विस्तार, घर–नक्सा पास, अरू सरकारी समन्वयजस्ता कुरामा चाहिँ कत्तिको अवरोध वा सहजता भयो ?
अवरोधको त कुनै नगरौं । वनको जग्गा मिच्यो भन्दै उजुरी गर्ने, पुनर्निर्माणमा साथ दिने सेना रातारात हटाउने, समाज भाँड्न आए भन्ने जस्ता आरोप पनि लागे । तर, हाम्रो लक्ष्य पूरा भएको छ, त्यसैले धेरै अवरोधको कुरा नगरौं ।
सहयोगको कुरा गर्ने हो भने हामी सधैं फिल्डमा खटियौं, सरकारी प्रक्रियाका लागि पनि आफंै पुग्यौं । धेरैले टिभीमा भए पनि देखिरहेको अनुहार, कलाकार भएकाले ढिलासुस्ती त हाम्रा लागि खासै गरिएन । तर, पुनर्निर्माणको सरकारी प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएकाले सुस्त भएको हो भन्ने लाग्छ ।
तीनवटा नमुना बस्ती बसाल्न सहयोग संकलन र खर्चचाहिँ कति भयो ? वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो ?
हामी दुई जनाले मात्रै यो काम गरेका होइनौं । हाम्रो टिमले कार्यक्रम गरेको हो । हामीले पहिलो बस्ती बसालेपछि आर्थिक संकटका कारण हाम्रो काठमाडौंको घर नै बेच्न लागेको कुरा सार्वजनिक भयो । त्यसपछि सहानुभूति र सहयोग एकसाथ प्राप्त भयो । देशका विभिन्न भागबाट सहयोग प्राप्त भयो । विदेशमा बस्नुहुनेहरूले पनि सहयोग पठाउनुभयो । हामीले पनि कार्यक्रमबाट रकम जुटायौं ।
यसैले गर्दा पहिलो बस्ती बनाउन ६७ लाख ५० हजार लाग्यो । त्यसले काभ्रेमा २० परिवारको पहारी बस्ती निर्माण भयो । यस्तै, त्यसबाट केही रकम बचेपछि सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा दोस्रो बस्ती बनाउने तयारी भयो । तर, बचत रकमले मात्रै पुग्ने अवस्था थिएन । फेरि अपिल गरेपछि आर्थिक सहयोग जुट्यो र ५ करोड १४ लाखमा गिरानचौरमा ६५ घर बनायौं ।
पछिल्लो पटक ५ करोड ४ लाख ३६ हजार रुपैयाँको लागतमा महोत्तरीको मुसहर बस्तीमा ५३ घर बनाएका छौं । यसरी काम गर्दा सहयोग दिने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी, व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो टिम र परिचालन गर्नेमा हामी खटिएर काम सम्पन्न गरेका हौं ।
अबको योजना के छ ? कलाकारितालाई चाहिँ कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
कलाकारिता त आफ्नो पेसा नै भइहाल्यो । यो नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । भर्खरै त मुहसर बस्ती पुनर्निर्माण सकियो । यो चरणको काम पूरा भए पनि बाँकी जिम्मेवारी अझै छन् । त्यसैले टेलिफिल्म, कलाकारिता, स्टेजलाई अब पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउँदै सामाजिक कामहरू सँगसँगै गर्ने योजनामा छौं ।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको छ, त्यसपछिका हरेक सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, पनि काम अझै सुस्त छ । तपार्इंहरूले त फटाफट काम गर्नुभयो । यो कसरी सम्भव भयो ?
एउटा कुरा, सरकारले भूकम्पलाई समस्याका रूपमा मात्र बुझ्यो । आखिर नजानु भूकम्प त गइ नै हाल्यो । यसको पुनर्निर्माणलाई अवसरका रूपमा लिन सक्नुपथ्र्यो र पर्छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका सबै संरचना, ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणपछि त्यही हेर्न पनि लाखौं पर्यटक आउने बाटो बन्नेछ ।
त्यसैले यसलाई अवसरका रूपमा पनि लिनु आवश्यक छ । अर्को कुरा, सरकारले ढिलो गरेर प्राधिकरण त बनायो तर यसका आफ्नै अंग सबै जिल्लामा पुग्न सकेनन् । अनेक सरकारी कार्यालयहरूबीच समन्वय गर्नै समस्या परिरहेको छ । ढिलाइको कारण यो पनि हो ।
अनि सरकारी कामका प्रक्रियागत झन्झट, कर्मचारीहरूबीचमा समन्वय अभाव, नागरिक परिचालनलगायतका कुरा पनि त्रुटिपूर्ण भए । पुनर्निर्माणको काममा हामीले जहाँ–जहाँ बस्ती बसाल्यौं, त्यहाँ–त्यहाँ पीडितहरूबाटै थुप्रै सहयोग पायौं । यसले गर्दा पुनर्निर्माणमा अपनत्व महसुस हुन्छ । त्यसैले हामीले फटाफट काम गर्न सक्यौं ।
अरूका लागि यति धेरै घर बनाइदिनुभयो, बस्ती बसाल्नुभयो । तर, आफ्नै घरचाहिँ कच्ची छ, टिनको छानो पनि खुइलिएको छ । काठको घर पुरानो भइसक्यो, कहिले बनाउने आफ्नोचाहिँ ?
आफ्नो कहिले बनाउने, के गर्ने भन्नेतर्फ लागेको भए यी सब काम नै हुने थिएन । आफ्ना लागि के गर्ने भन्ने नसोचेकै कारण यो सब सम्भव भएको हो । हाम्रो त पुरानै भए पनि घर छ, खेतीपाती छ । अब बिस्तारै बनाउँला । ठ्याक्कै यही बेलामा बनाउने भन्ने कुनै योजना छैन ।
धुर्मुस धुर्मुस–सुन्तली हास्यकलाकार सीताराम कट्टेल